Tena MISY DIKANY ny Fiainana
Ny Tilikambo Fiambenana | No. 2 2019
HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bashkir Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Biak Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Digor Douala Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fitenim-paritra Alemà Fon Frantsay Ga Galoà Garifuna Gitonga Goujrati Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Beliza Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marathe Marshall Masedonianina Maya Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Puebla Avaratra) Navajo Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Ronga Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tarasque Tatar Tchouvache Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tlapanèque Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yap Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
Faizal. Tsy maintsy nodidiana fo izy. Vao herintaona talohan’izay koa no maty ny vadiny. Hoy izy: “Rehefa mamaky ny bokin’i Joba aho, dia azoko tsara hoe maninona izy io no nataon’i Jehovah ao amin’ny Baiboly. Maivamaivana ianao rehefa mamaky tantaran’olona efa niaina zavatra hoatran’ny anao. Tena mbola misy dikany ny fiainana!”
Tarsha. Mbola kely izy tamin’ny mamany maty. Izao no nolazainy: “Na dia be dia be aza ny olana atrehinao, dia lasa misy dikany ny fiainanao raha mahafantatra an’ilay Mpamorona ianao. Falifaly koa ianao sady manana fanantenana. Afaka matoky ianao hoe tena hanampy sy hanohana anao i Jehovah.”
HITANTSIKA tamin’ireo lahatsoratra teo aloha hoe mila tsy ho zaka ny olana indraindray. Raha izany no iainanao, dia mety hieritreritra ianao hoe: ‘Mba misy dikany ihany ve ny fiainana? Mba misy miraharaha an’ahy ihany ve?’ Matokia hoe hitan’Andriamanitra ny fahorianao, ary tsy manao tsinontsinona an’izany izy. Sarobidy aminy ianao!
Natoky an’Andriamanitra ilay mpanoratra ny Salamo faha-86. Izao no nolazainy: “Hiantso anao aho amin’ny andro fahoriako, satria hamaly ahy ianao.” (Salamo 86:7) Ahoana anefa no hanaovan’Andriamanitra an’izany?
Mety hoe tsy tonga dia esorin’Andriamanitra ny olana mahazo anao. Manome toky anefa ny Baiboly hoe afaka manampy anao hilamin-tsaina izy. Hoy ny Filipianina 4:6, 7: “Aza manahy na amin’inona na amin’inona, fa amin’ny zava-drehetra, dia ampahafantaro an’Andriamanitra ny fangatahanareo, amin’ny alalan’ny vavaka sy ny fitalahoana mbamin’ny fisaorana. Ary ny fiadanan’Andriamanitra izay lehibe lavitra noho ny eritreritra rehetra no hiambina ny fonareo sy ny sainareo.” Ho hitanao amin’ireto andinin-teny ireto fa tena tia anao Andriamanitra.
Sarobidy amin’Andriamanitra ianao
“Tsy misy hadinoina eo anatrehan’Andriamanitra [ny fody], na iray akory aza. ... Sarobidy noho ny fody maro ianareo.”—Lioka 12:6, 7.
ERITRERETO IZAO: Vorona tena kely ny fody, ka mety tsy hiraharaha azy ireny ny olona. Karakarain’i Jehovah anefa ny fody tsirairay, satria sarobidy aminy. Mbola sarobidy lavitra amin’Andriamanitra ny olombelona. Isika mantsy no zavaboariny miavaka indrindra eto an-tany. Nataony ‘araka ny endriny’ isika ka afaka manahaka ny toetrany.—Genesisy 1:26, 27.
‘Jehovah ô, mandinika ahy amin’ny an-tsipiriany ianao, ka mahalala ahy. Fantarinao ny eritreritro. Diniho aho, ka fantaro ny zavatra mampanahy ahy.’—Salamo 139:1, 2, 23.
ERITRERETO IZAO: Fantatr’Andriamanitra tsara ianao. Fantany ny fihetseham-ponao na dia tsy teneninao amin’ny hafa aza. Mety tsy hahazo ny zavatra iainanao koa ny olona. I Jehovah anefa afaka manampy anao, satria azony tsara ny olana atrehinao. Tena misy dikany àry ny fiainana.
Manohana sy mitari-dalana anao Andriamanitra
“Henoy ny vavaka ataoko, Jehovah ô! Ho tonga any aminao anie ny antsoko, rehefa miantso vonjy aho! ... Aoka ianao hanongilan-tsofina hihaino ahy. Aza ela, fa valio aho amin’ny andro iantsoako anao. ... Hihaino ny vavak’ireo tsy manana na inona na inona intsony Izy.”—Salamo 102:1, 2, 17.
ERITRERETO IZAO: Hitan’i Jehovah ny ranomaso rehetra nalatsaky ny olona hatramin’izay, ary tsy hadinony mihitsy. (Salamo 56:8) Tsy hadinony koa ny olana rehetra natrehinao sy ny ranomaso narotsakao, satria sarobidy aminy ianao.
“Aza miherikerika noho ny tahotra, fa izaho no Andriamanitrao. Hanatanjaka anao aho ka hanampy anao. ... Izaho Jehovah Andriamanitrao no ... milaza aminao hoe: ‘Aza matahotra fa hanampy anao aho.’”—Isaia 41:10, 13.
ERITRERETO IZAO: Vonona hanampy anao Andriamanitra. Hanarina anao izy raha lavo ianao.
Mbola ho tsara be ny hoavy
“Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra an’izao tontolo izao, ka nomeny ny Zanany lahitokana mba tsy ho ringana izay rehetra maneho finoana azy, fa hanana fiainana mandrakizay.”—Jaona 3:16.
ERITRERETO IZAO: Sarobidy amin’Andriamanitra ianao matoa nafoiny ho anao i Jesosy Zanany. Afaka manantena ny hiaina mandrakizay ianao noho ny soron’i Jesosy. *
Miady saina ve ianao ary mila tsy ho zakanao ny olana atrehinao? Ianaro tsara ny Tenin’Andriamanitra ary miezaha hatoky ny fampanantenany. Ho sambatra ianao amin’izay, ary hino hoe mbola misy dikany ny fiainana.
^ feh. 19 Manazava bebe kokoa momba ny soron’i Jesosy sy ny soa entin’izy io ilay video hoe Tsarovy ny Nahafatesan’i Jesosy ao amin’ny www.jw.org/mg. Jereo ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > VIDEO > NY FIVORIANAY SY NY FANOMPOANAY.
Rehefa Mafy Loatra ny Manjo Anao
Raha Niharan’ny Loza Ianao
Rehefa Maty ny Olona Akaiky Anao
Raha Nivadika Taminao ny Vadinao
Rehefa Marary Mafy Ianao
Rehefa Tsy Te ho Velona Intsony Ianao
‘Miahy Anao Izy’
Soratra Fandikana boky NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 2 2019 | Mbola Misy Dikany ve ny Fiainana?
No. 2 2019 | Mbola Misy Dikany ve ny Fiainana?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA No. 2 2019 | Mbola Misy Dikany ve ny Fiainana?
Handray Soa Ianao Rehefa Fantatrao hoe Tia Anao Izy
Nahoana no Tena Sarobidy Ilay Fanomezana?